Wasiir Koowaad Rooble Oo Magacaabay Guddiyada Doorashada Heer Federaal Iyo Heer Maamul Goboleed – Great Banaadir
MUQDISHO – Wasiir Koowaadka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ee Xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Rooble ayaa Caawa magacaabay Guddiyada Doorashooyinka Heer Federaal, Heer Dowlad Goboleed iyo Guddiga Xalinta Qilaafaadka.
Wareegto kasoo baxay Xafiiska Wasiir Koowaad Rooble ayaa lagu magacaabay Guddiyada Doorashooyinka, isla markaana lagu shaaciyay Magacyadooda, iyada oo wax ka bedel lagu sameeyay.
Wasiir Koowaad Rooble iyo Guddiga Heer Wasiir ee uu u xilsaaray Xaqiijinta Ergooyinka waxa ay sameeyeen Dadaalo kala duwan, si loo dhageysto Cabashooyinka laga soo gudbiyay Guddiyada Doorashooyinka.
“Iyada oo la tixgalinayo Halbeegga la dajiyay Hishiiskii 17ka Sebtember ee Sifooyinka looga baahan yahay Qof kamid noqonaya Guddiyada Doorashooyinka ,waxa marka ugu horreysay Liiska laga saaray 34 Xubnood oo kamid ahaa 67da Xubnood oo Cabasho laga keenay. Waxa lagu celiyay Dhinacyadii ay markii hore ka yimaadeen, si loo soo badalo Xubnahaas,” ayaa lagu yiri Qoraal kasoo baxay Xafiiska Rooble.
Sidoo kale Qoraalkaan lasoo saaray ayaa waxaa intaas lagu sii daray “Muddo kadib dhamaan Dowlad Goboleedyada iyo ‘Somaliland’ waa ay soo gudbiyeen Liisaskii wax ka badalka lagu soo sameeyay, si kala hufid hor leh Xubnihii la soo badalay waxa laga helay 6 Xubnood oo aan buuxin Shuruudaha looga baahan yahay Xubnaha Guddiga, tani ayaa waxa ay ka dhigeysaa Liiska laga saaray Guddiyada 40 xubnood”.
Hoos ka Aqriso dhammaan Magacyada Xubnaha Guddiyada Doorashooyinka oo dhammeystiran.